Axmed Madoobe oo Kismaayo kusoo laabtay - Awdinle Online
Axmed Madoobe oo Kismaayo kusoo laabtay
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maalmahaan ku sugnaa Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ayaa Maanta waxaa ay dib ugu soo laabteen Magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee Maamulka Jubbaland.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha Kismaayo kusoo dhaweeyey Madaxweyne kuxigeenka labaad ee Jubbaland Cabduqaadir Sheekh Maxamuud lugadheere,Xubno kamid ah Golaha Wasiirada Jubbaland iyo qaar kamid ah Bulshada Magaalada Kismaayo.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Wafdiga Axmed Madoobe uu qeyb ka yahay Xildhibaan Cabdi Rashiid Xidig oo kamid ahaa Xubnihii Isbedel-doonka Jubbaland ee heshiiska la gaaray Axmed Madoobe iyo Xubno kamid ah Golaha Wasiiradda Jubbaland.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Cabdi Naasir Seeraar oo kamid ahaa Xubnaha ugu sareeye Isbedel-doonka Jubbaland uu ku haray Magaalada Kismaayo sababo aan la sheegin.
Axmed Madoobe iyo Cabdi Rashiid Xidig oo haatan ku sugan qeybta nasahada ee Garoonka diyaaradaha Kismaayo ayaa la filayaa inay goordhow Warbaahinta la hadlaan.
Previous articleBeesha Caalamka oo si Buuxda u Taageertay Heshiiska ay gaareen Axmed Madoobe, Seeraar iyo Xidig
Next articleDuqayn lala bartilmaamadsaday xubno al shabab u diyaarisay weerarada 17-ka bisha Ramadaan